अबको चुनावपछि प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति पक्का ! — newsparda.com
एमाले छोड्न लागेका भीम रावल अब अध्यक्ष ओलीपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता !
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको रुपमा चर्चामा आएका छन् । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाले अध्यक्षको दाबेदार नेता भीम रावलले प्रदेश संयोजक हुन मरिहत्ते गर्नु नपर्ने बताएका छन्। नेता थापाले रावललाई आफूहरुले सिनियर नेता मानेको भन्दै उनी उपाध्यक्षको पदीय हिसाबले नै जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने बताएका हुन्।